Otu n'ime ngwaọrụ kachasị amasị m maka ịtụ ma bipụta ndepụta RSS ma ọ bụ pọdkastị m na mgbasa ozi mmekọrịta bụ FeedPress. Na nwute, ikpo okwu enweghị njikọ LinkedIn, agbanyeghị. Agara m lee ma ọ bụrụ na ha ga-agbakwunye ya ma ha weta ụzọ ọzọ - mbipụta na LinkedIn site na Zapier. Zapier WordPress Plugin na LinkedIn Zapier nweere onwe ya maka ọnụọgụ nke njikọta na otu narị ihe, yabụ enwere m ike iji ngwọta a
Martech Zone agabigala ọtụtụ iterations kemgbe ịmalite na 2005. Anyị agbanweela ngalaba anyị, kwaga saịtị ahụ na ndị ọbịa ọhụrụ, wee degharịa aha ọtụtụ ugboro. E nwere ugbu a ihe karịrị 5,000 isiokwu ebe a na ihe fọrọ nke nta 10,000 kwuru na saịtị. Idebe saịtị ahụ nke ọma maka ndị ọbịa anyị na maka injin nchọta n’oge ahụ abụwo ihe ịma aka. Otu n’ime nsogbu ndị ahụ bụ ileba anya na imezi njikọ mebiri emebi. Njikọ ezughị oke dị egwu - ọ bụghị naanị
Abụ m nnukwu onye na-akwado nyocha abụọ (2FA) n’elu ikpo okwu ọ bụla m na-agba. Dịka onye na-arụ ọrụ na ndị ahịa na ndị ahịa data, enweghị m ike ị ga - akpachapụ anya gbasara nchekwa yana njikọta okwuntughe dị iche iche maka saịtị ọ bụla, na - eji Apple Keychain dị ka ebe nchekwa paswọọdụ, ma mee ka 2FA na ọrụ ọ bụla kwesịrị. Ọ bụrụ na ị na-agba WordPress dị ka usoro njikwa ọdịnaya gị, a na-ahazi usoro ahụ iji zipu ozi email